Kungcono ukunyanga kwe-Post cycle (PCT) xa uthatha i-steroids | AASraw
/Blog/Ukulahlekelwa ngamatye/Kungcono ukunyanga kwe-Post cycle (PCT) xa uthatha i-steroids
ezaposwa ngomhla 12 / 28 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ukulahlekelwa ngamatye.
1.Tamoxifen Citrate powder eluhlaza 2.Tamoxifen Citrate Usetyenziso lwefowuni eluhlaza
3.Clomiphene citrates powder eluhlaza 4. Umlinganiselo we-Clomiphene citrate powder eluhlaza
5.Anastrozole powder eluhlaza 6. Isilinganiselo se-Anastrozole powder eluhlaza
7.Letrozole powder oluhlaza 8.Iziphumo ze-Letrozole Raw Powder
9.Kubani ukuthenga unyango ophezulu lwePost Post (PCT) i powder eluhlaza kwixabiso lokukhuphisana?
I-Tamoxifen Citrate ividiyo eqingqiweyo yepowder
|.Tamoxifen Citrate Abalinganiswa basisiseko:
igama: Tamoxifen Citrate
I-molecular Formula: C32H37NO8
Isisindo somzimba: 563.64
Melt Point: 140-144 ℃
I-PCT ye-post cycle (PCT) yindlela yokuqesha izidakamizwa ezisebenza ngeendlela ezahlukeneyo zokuhamba ngokuzama ukuzinzisa nokubuyisela ama-hormone womsebenzisi kwakhona ngokuqhelekileyo emva kokunyanzelisa umjikelezo we-anabolic androgenic steroid liyekile.
Emva kokuba umsebenzisi selekile ukusetyenziswa kwe-anabolic androgenic steroids zishiywe kwimiba apho ukuveliswa kwetrostoneone yabo yemvelo ikhutshwe, ngamanye amaxesha kakhulu. Ukongezelela, amanqanaba e-steroids ahlala ehla kwindlela yawo, eshiya umsebenzisi kwisigxina seposi esesigxina sombuso, esingabonakalisa ukukwazi kwabo ukugcina ubunzima be-muscle ngexesha. Ngaloo nto engqondweni, kulula ukugqiba ukuba singathanda ukufumana indlela yokubuyisela ukuveliswa kwemveliso ye-testosterone ukuzisa indawo engcono kwimpilo kunye nokugcina izicubu zomzimba.
Kukho amaninzi amaninzi asetyenziswayo PCT powders ngumbutho womzimba xa bethatha i-steroids powder: Tamoxifen Citrate, Clomiphene citrate, Anastrozole, Letrozole.
1.Tamoxifen Citrate powde eluhlaza r
I-Tamoxifen I-Citrate Ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yi-anti-estrogen, ngokwenene bobabini abachasiyo kunye ne-agonist.Kukhethiweyo i-modro-receptor modulator (I-SERM) esebenza ngokubini ngokunciphisa izinto ezandisa ukwanda kweeseli zebele kunye nokwanda kwezinto ezinciphisa ukukhula kweeseli zebele.
2.Tamoxifen Citrate powder powder Usetyenziso:
(1) Ukwenza i-Adult Dose ye-Cancer Breast:
Ukunyangwa komhlaza wesifo se-metastatic kwabesetyhini kunye namadoda:
I-20 kwi-40 mg ngomlomo Izikhulu eziphezulu kune-20 mg kufuneka zinikezwe ngamanani ahlukeneyo (kusasa nakusihlwa).
Ukunyanga kwabasetyhini abane-Ductal Carcinoma e-Situ, emva kokuhlinzwa kwebele kunye nemitha:
20 mg ngomlomo ngemihla ye-5.
Ukunciphisa iziganeko zomhlaza wesifuba kubasetyhini abasengozini enkulu yomhlaza wesifuba:
(2) Ukwenza i-Adult Dose yeCataltic Breast - i-Adjuvant:
Ukunyanga kwesifo somhlaza wesifuba se-node kuma-postmenopausal basetyhini emva kwe-mastectomy okanye i-mastectomy ye-segmental, i-disillaction ye-axillary kunye ne-irradiation yebele:
10 mg ngomlomo 2 kumaxesha e-3 ngosuku lwe-5 iminyaka.
(3) Ukwenza i-Adult Dose yeCataltic Breast - i-Palliative:
10 ku-20 mg ngomlomo kabini ngosuku
Impendulo enenzuzo ingabonakali kwiinyanga eziliqela emva kokuqaliswa kweyeza.
(I-4) Ukusetyenziswa kwe-Poseatric Dose kuMcCune-Albright Syndrome:
Ukusetyenziswa kwamantombazana aneminyaka eyi-2 kwiminyaka eyi-10 kunye noMcCune-Albright Syndrome kunye nobuntwaba obunobuncwane:
20 mg kanye ngosuku. Ubude bonyango luya kwiinyanga ze-12.
(5) Usulelo lwe-Pediatric Dose for Preccious Puberty:
3.Clomiphene citrates powder eluhlaza
I-Clomiphene citrate yiyilisi ye-fertility non-steroidal. Yibangela i-pituitary gland ukukhupha i-hormones efunekayo ukuze kukhuthazwe i-ovulation (ukukhululwa kweqanda kwi-ovary).
I-citomiphene citrate isetyenziselwa ukwenza i-ovulation kubasetyhini ngeemeko ezithile zezokwelapha (ezifana ne-polycystic syndrome syndrome) ekhusela ukuvuthwa kwe-ovulation ngokwemvelo. I -Clomiphene citrate ingasetyenziselwa iinjongo ezingabhalwanga kule khowudi yeyeza.
4. Umlinganiselo we-Clomiphene citrate powder eluhlaza
Ukusetyenzwa koMntu omdala wokuThuthukiswa koMzimba:
50 mg ngomlomo kanye ngosuku ngemini ye-5. Ulwaphulo lufanele luqaliswe okanye lusondele kwimihla ye-5th yesijikelezo sokuya esikhathini, kodwa ingaqaliswa nanini na kwizigulane ngaphandle kwentsholongwane yokuphuma kwamanzi.
Ukuba i-ovulation ivela kwaye ukukhulelwa akufezekanga, ukuya kwii-2 iikhosi ezongezelelweyo zeComomiphene citrate 50 mg ngomlomo kanye ngosuku ngemini ye-5 ingalawulwa. Ikhosi nganye elandelayo iqala ukuqala emva kweentsuku ze-30 emva kwenkqubo yangaphambili kwaye emva kokukhulelwa kukhishiwe.
Uninzi lwezigulane zivutha emva kwekhosi yokuqala yeyeza. Nangona kunjalo, ukuba isigulane sihluleka ukuvota, ikhosi yesibili ye-100 mg / imini yeentsuku ze-5 ingafumaneka kwangethuba leentsuku ze-30 emva kwekhosi yokuqala. Inkambo yesithathu ye-100 mg / ngosuku yeentsuku ze-5 ingahanjiswa emva kweentsuku ze-30, ukuba kuyimfuneko.
Unyango olungaphezu kweesithathu ze-Clomiphene citrate, ama-dosage amakhulu kune-100 mg kanye ngosuku, kunye / okanye ixesha lokuhlala kwii-5 iintsuku azikhuthazwa ngumenzi. Nangona kunjalo, ukukhulelwa okuphumelelayo kunye nokudilizelwa kwexesha kuye kwaxelwa kubasetyhini abafumana i-200 mg / imini kwii-5 iintsuku, okanye i-course ye-10 yonyango yonyango, okanye iikhompyutheni zonyango ezilandelelana ngaphaya kwe-3 eyinconywa ngumenzi.
Ukusetyenzwa kwe-Adult Dose yeCactation Suppression:
50 ku-100 mg ngomlomo kanye ngosuku ngosuku lwe-5. Ngokuqhelekileyo, enye iklasi yokwelapha inele.
Ukusetyenzwa koMntu omdala we-Oligospermia:
25 ku-100 mg ngomlomo omnye ngosuku. Ulwaphilo lukarholwa ngokubanzi kwiinyanga eziliqela.
5.Anastrozole powder eluhlaza
I-Anastrozole powder eluhlaza yindlela enye ye-PCT, isifo esinamandla kakhulu-anti-estrojeni ngokusemthethweni se-Aromatase Inhibitor (AI). Abasebenzisi abaninzi be-anabolic steroid bathembele kwi-Arimidex malunga nokukhuselwa kwe-estrogenic. Uninzi lwe-anabolic steroids unako ukukhangela i-aromatase kwaye ikhokelela ekugqithiseni i-estrogen, leyo leyo ingakhokelela kwezinye zeziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo zokusetyenziswa kwe-anabolic steroid.
6.Isilinganiselo se-Anastrozole powder eluhlaza
I dose ye-ARIMIDEX yenye ye-tablet ye-1 mg ithathwa kanye ngosuku. Izigulane ezineesifo somhlaza wesifuba esiphezulu, i-ARIMIDEX ifanele iqhutywe kuze kube yilapho iqhuma ukuqhuma. I-ARIMIDEX ingathathwa kunye okanye ngaphandle kokutya.
Ukufumana unyango olusisigxina kumdlavuza wesibeleko esifuba kwintombi yama-postopaopausal, ubude bonyango obuninzi bungaziwa. Kwilingo le-ATAC, i-ARIMIDEX yalawulwa iminyaka emihlanu [jonga i-Clinical Studies].
Akukho kuhlengahlengwa kweerayimenti kuyimfuneko kwizigulane ezinokukhubazeka kwemithwaba okanye izigulane ezisebekhulile [sebenzisa Ukusetyenziswa Kweziganeko Ezingqalileyo].
Izigulane ezinobungozi obubuhlungu
Akukho tshintsho kwi dose kunconywa kwizigulane ezinobungozi obucetyiswayo obuncinane. I-ARIMIDEX ayizange ifundwe kwizigulane ezinobungozi obunzima be-hepatic sibone Ukusetyenziswa kwiMimandla ekhethekileyo.
7.Letrozole powder oluhlaza
I-Letrozole ipowder eluhlaza yi-anti-estrogen yentsapho ye-Aromatase Inhibitor (AI) kwaye yenye yeyona ndlela iphezulu kakhulu kwaye iphumelela ngamandla kuyo yonke i-AI. Enyanisweni, ngamanye amaxesha ubuchule bawo buninzi kunokuba abanye basebenze xa besetyenziselwa ukusetyenziswa kweleyilethi. I-Letrozole yaqala ukufumana imvume ye-US FDA kwi-1997 kwaye yayiza kutshitshisa imarike phantsi kwegama legama elithi Femara ngeNovartis. Nangona u-Femara ligama lolawulo lwe-AI, ngokungafani ne-AI eninzi yiyo kuphela eyaziwayo ngokubanzi Igama leekhemikhali i-Letrozole kakhulu ngokuqhelekileyo kunokuba ligama layo likhangele igama.
I-Letrozole yaqala ukuhlaselwa kumgudu wokulwa nomhlaza wesibeleko kwintombi yabasetyopa. Enyanisweni, bekuya kufana nokufana ne-AI eyaziwayo e-Arimidex (i-Anastrozole). Nangona kuhloswe ukuba unyango lwebele lwebele, njengama-AI amaninzi, sele ifumene ikhaya elamkelweyo phakathi kwabasebenzisi be-anabolic steroid. I-Letrozole yenye yezona zinto zisetyenziswa ngokutsha-estrogen phakathi kwabasebenzisi be-steroid ngexesha lokusebenzisa i-steroid ukulwa nemiphumo engathintekiyo ye-estrogenic. Iphumelele kakhulu njenge-anti-estrogen kule nkalo ezininzi ezininzi ze-anabolic steroids ziye zaguqula ngokuphumelelayo iimpawu ze-gynecomastia nge-Letrozole.
I-Letrozole isetyenziselwa ukuphatha umhlaza wesifuba esesiswini ekuqaleni kwabasetyhini abaye bafumana ukuphela komyeni (utshintsho lobomi, ekupheleni kwexesha lokuhamba kwenyanga) kwaye ngubani oye waphathwa nezinye iindlela zokwelapha, ezifana nokushisa imitha okanye ukuhlinzwa ukuze kususwe isisu. Isetyenziselwa ukuphatha umdlavuza webele wamancinci kwabasetyhini abaye bafumana ukuyeka umyeni kwaye sele baphathwe ngonyango ebizwa ngokuba yi-tamoxifen (Nolvadex) kwiminyaka eyi-5.
I-Letrozole isetyenziswe nakwabasetyhini abaye bafumana ukuphela komzimba njengonyango lokuqala lomhlaza wesisu oye wasasazeka ngaphakathi kwebele okanye kwezinye iindawo zomzimba okanye kwabasetyhini abanomdlavuza webele xa bebethatha i-tamoxifen. I-Letrozole iklasi yeyeza ebizwa ngokuba yi-nonsteroidal aromatase inhibitors. Isebenza ngokunciphisa inani le-estrogen eliveliswa ngumzimba. Oku kunokunciphisa okanye ukuyeke ukukhula kwezinye iintlobo zeeseli zomhlaza zesifuba ezidinga ukuba i-estrogen ikhule.
8.Iziphumo ze-Letrozole Raw Powder
2.5 mg ngomlomo kanye ngosuku
Izicwangciso zeAdjuvant and Extended Adjuvant: Ubungakanani besikhathi asiyiyo; ukuyeka unyango ngokuphindaphinda.
-Izifo eziphuculweyo: Kuze kube lula ukunyuka kwesisu.
-Unyango olusandulweyo lwabafazi be-postmenopausal abane-hormone receptor enomdlavuza wokuqala webele.
-Unyango olusandulweyo olungumdlavuza wesifo somhlaza wesifuba esasesikhatsini se-womenmen postusopausal abafumana i-5 iminyaka ye-adjuvant tamoxifen unyango.
-Inqanaba lokuqala lomnxeba wesifo somhlaza wesifuba esiphezulu kwintombi yama-postopaopaus ephethe i-hormone receptor enomdla okanye engaziwayo yomhlaza wesifuba esisezantsi okanye esaziwayo; Ukwelashwa komgca wesibini wesifo somhlaza wesifuba esiphezulu kwabasetyhini abasemva be-postoprologus emva kokunyuka kwesifo emva kwesifo se-antiestrogen.
Ukwenza i-Adult Dose kwiCataltic Breast - Adjuvant
Xa unyango lomhlaza webele, i-Dorozole dose eqhelekileyo iya kuba yi-2.5mg ngosuku. Eli liqondo elinamandla kakhulu kwaye liya kuqhutywa ngokuqhelekileyo de kube nomhlaza uncedise. Kwiimeko ezininzi, kwindawo yokuxolelwa isiguli siya kutshintsha ukusuka kwi-Letrozole ukuya kwi-Nolvadex kwimeko yokucwangcisa unyango.
Umsebenzisi we-anabolic steroid, i-Letrozole isisindo ngokuqhelekileyo iya kuba sezantsi. Ngaphandle kokusebenzisa i-anabolic steroids, i-2.5mg dosing iya kuphakama kakhulu kwaye ikwazi ukukhupha umntu onamandla; Enyanisweni, kuqinisekiswe ngokuqinisekileyo. Okukuphela kwento esingayenza ngayo loo dose kuyakuba kukulwa neempawu zokuqala ze-gynecomastia.
Ukuba iimpawu ziqala ukubonisa ii-7-14 iintsuku kwi-dose ye-2.5mg ngosuku zingakwazi ukuguqula iimpawu. Xa iimpawu ziqala ukutshabalalisa umntu kufuneka akwazi ukuhlawula kwiqondo elithile elilawulwayo kwaye alondoloze ukuba kusele umjikelezo. Ukuba oku kusebenze kukho ithuba elihle le mpawu sele isetyenziswe ngaphaya kokulungisa. Xa oku kwenzekayo kuphela into eya kususa i-gynecomastia yakho yonyango.
Ukukhuselwa kwe-estrogenic ehambisanayo, amaninzi amadoda aya kufumana i-0.5-1mg yonke imihla ukuba ibe ngaphezu kokwaneleyo. Xa isetyenziswe njenge-anti-estrogen ephantsi izicwangciso zonyango lwe testosterone, nangaphantsi kunokwenzeka. Ngomqhubi womzimba okhuphisanayo, iintsuku zokugqibela ze-7-14 phambi kokhuphiswano, i-1mg epheleleyo ngosuku ekhokelela ekuboniseni ingaba yimizi eqinile kwaye iya kunceda kakhulu ngokumelela nokubukeka kancinci. Oku kunjalo, akukho nto ininzi efuna ukuyigcina ixesha elide njengoko linokuba nzima.
1.Ukuqhagamshelana nathi inkqubo yophenyo ye imeyile, okanye ummeli we-skype ummeli wesevisi (CSR).
Ziziphi ezixhaphakileyo zesondo nokuphucula iziyobisi kunye nendlela ezisebenza ngayo?	I-SARM esetyenziswa ngokuqhelekileyo: Kukuphi ukuthenga i-SARM powder eluhlaza kwixabiso elinamandla?